Nagarik News - प्रक्रियामा विश्वास
मतदाता, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ५
आम नेपाली मतदाताझैं चिकित्सक डा. भगवान कोइराला पनि मंसिर ४ मा हुने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भोट हाल्न आतुर छन्। आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई जिताएर संविधानसभामा पठाउने धोको उनको छ। डा. कोइरालाले यसअघि दुईपटक मतदान गरेका छन्। पहिलो संविधानसभाको चुनाव र ०५६ सालको आम चुनावमा।
निकै व्यस्त रहे पनि चुनावमा जसरी पनि भोट हाल्न जाने उनको इच्छा छ। '०५६ मा भएको आम चुनावमा भोट हालेँ। त्योभन्दा अघि पढाइ र काममै व्यस्त भएकोले केके भयो केके?' उनले भने।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने प्रक्रियामा पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्छन्, उनी। पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसके पनि देशमा पुनः संविधान बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन लागेकाले यस प्रक्रियामा आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उनी बताउँछन्।
डा. कोइरालाका अनुसार पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुमा धेरै कारण छन्। उनको विचारमा यदि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले आफ्नो र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थबारे नसोची केही हुनै सक्दैन। भन्छन्, 'पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन त्यसमा विभिन्न कारण होलान्। तर, प्रमुख कारण पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई राखेकैले हो।'
चुनावका लागि केही दिनमात्र बाँकी रहे पनि आम जनतामा भने पहिलो संविधानसभामा देखिएको उत्साह अहिले देखिएको छैन। डा. कोइरालालाई पनि जनताको उत्साहमा कमी आएको जस्तो लागेको छ। तर, चुनावी प्रक्रियामा देश गइसकेको अवस्थामा यसले निकास दिनेमा भने उनी आशावादी छन्। उनी भन्छन्, 'यो संविधानसभाको चुनावबाट पनि संविधान आउँछ भन्नेमा मलाई चिन्ता छ। तर, जे भए पनि हामीले प्रक्रियामा विश्वास गर्नुपर्छ। मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संविधान बन्न जे जस्तो सहयोग गर्न सक्छु गर्छु।'
डा. कोइराला कुनै एक पार्टीभन्दा पनि पार्टीभित्र रहेका व्यक्तिबाट आशावादी छन्। उनी भन्छन्, 'मेरो आफ्नो आकलन त छ। तर, मैले अहिले त्यो भन्दिएँ भने त्यसले आम मतदातालाई पनि असर गर्न सक्छ। त्यही कारण म कसलाई भोट हाल्छु वा कसले जित्छ भन्दिनँ।'
बुवालाई गुमाएको ४५ दिनजति भएको थियो। नयाँ स्वरूपमा निर्माण गर्न पूरै भत्काइएको लाजिम्पाटस्थित होटल एम्ब्यासडरको ढुंगामाटोको थुप्रोमाथि उभिइरहेको थिएँ। पारि सडकमा स्कुटर रोकेर लगभग ७० वर्ष हाराहारी देखिने एक वृद्धले...